युगसम्बाद साप्ताहिक - कहिले नेतृत्व पाउने नेविसंघले ?
Saturday, 01.25.2020, 01:01am (GMT+5.5) Home Contact
कहिले नेतृत्व पाउने नेविसंघले ?
Thursday, 03.28.2019, 11:00am (GMT+5.5)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । नेविसंघ को ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा पनि तदर्थ समिति गठन नहुँदा नेविसंघ नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख भ्रातृ संस्थाका रुपमा रहेको नेविसंघको विसं २०७३ साउनमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष नैनसिंह महरले विसं २०७५ माघमा राजीनामा दिएसँगै नेविसंघ नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो । नेपाली काङ्ग्रेसको नर्सरीका रुपमा रहेको नेविसंघमा अहिले अध्यक्ष नहुँदा १२औँ महाधिवेशनसमेत अन्योलमा परेको छ ।
मुलुकमा भएका विभिन्न राजनीतिक र शैक्षिक आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा उभिएर काम गरेको नेविसंघको नेतृत्व नहुँदा पार्टीलाई समेत ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । विसं २०२७ वैशाख ७ गते पार्टी प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका बेला स्थापना भएको नेविसंघमा अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा १८ जनाले नेतृत्व सम्हाल्ने मौका प्राप्त गर्नुभयो । नेविसंघको पहिलो अध्यक्ष विपिन कोइराला हुनुहुन्छ ।
स्थापनाकालदेखि हालसम्म आइपुग्दा छ अध्यक्ष निर्वाचित, सात अध्यक्ष तदर्थ र पाँच अध्यक्ष सर्वसम्मत नेतृत्व लिएको पाइन्छ । नेविसंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य लीलावल्लभ दाहाल ‘काका’ निर्वाचित केन्द्रीय समितिले समयमा अधिवेशन गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । “पार्टीले विद्यार्थी हक र हितमा खट्ने इमान्दार विद्यार्थीलाई समावेश गरेर तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
नेविसंघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य सुनिता पोखरेल पार्टीले निर्माण गर्न लागेको नेविसंघको तदर्थ समितिको नेतृत्व महिलाले पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “नेविसंघमा अहिलेसम्म धेरै पुरुष नेतृत्वमा पुगेका छन्, अहिले महिलालाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाएर महाधिवेशनमा जानुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । नेविसंघका निवर्तमान कोषाध्यक्ष शिव रिमाल पार्टीले ३२ वर्ष कम उमेरका विद्यार्थीलाई अध्यक्ष बनाएर तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “विधानमा उल्लेख भएअनुसार तत्काल समिति बनाएर केन्द्रीय महाधिवेशनमा नेविसंघ जानुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
वर्तमान नेतृत्वले आम विद्यार्थीमाझ शैक्षिक मुद्दा लिएर जान नसक्नु र विद्यार्थीलाई निराश पार्ने प्रवृत्तिको काम गरेको उहाँको भनाइ छ । नेविसंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारी मुलुकको लोकतन्त्र र शिक्षाका लागि लडेको विद्यार्थी यो अवस्थामा आइपुग्नु दुःखद् भएको बताउनुहुन्छ ।
“हाम्रै कार्यसमिति निर्वाचन गराउन सक्षम थियो, तर अध्यक्षले कसैसँग छलफल नगरी राजीनामा दिँदा यो अवस्थामा आएको हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ । पार्टीका नेताको गैर जिम्मेवारीपनका कारण तदर्थ समिति गठन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष रञ्जीत कर्ण पार्टीले तत्काल तदर्थ समिति बनाएर छ महीनाभित्र महाधिवेशन गराईसक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “वडा, स्थानीय, जिल्ला प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाएर नेविसंघको महाधिवेशन तत्काल गर्नुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
नेविसंघको ४८ वर्षको इतिहासमा विसं २०५९ मा तत्कालीन नेविसंघका अध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले समयमा महाधिवेशन गरेर गुरुराज घिमिरेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भने अरु अध्यक्षले समयमा अधिवेशन गर्न सक्नुभएन ।
यस्तै विमलेन्द्र निधि, एनपी साउद, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल र नैनसिंह महर भने निर्वाचनबाट जितेर अध्यक्ष बने पनि महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नुभएन । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी नेविसंघको महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नु नेविसंघ र पार्टी नेतृत्वको कमजोरी भएको बताउनुहुन्छ । “पार्टीले तत्काल तदर्थ समिति बनाएर निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । विद्यार्थीबीच लोकप्रिय सङ्गठन बनाउने व्यक्तिलाई तदर्थ समितिको नेतृत्व दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा नेविसंघभित्र तदर्थ समिति बनाउने कुरामा पार्टीभित्र विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताउँदै चाँडो नै टुङ्गो लाग्ने बताउनुहुन्छ । “विधान र प्रक्रियाअनुसार नै नेविसंघको तदर्थ समिति बन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।